Kambodja: Ny Famotehana ny Dey Krahorm · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Oktobra 2018 15:13 GMT
Ny Sabotsy 24 janoary 2009, naharay an'ireto hafatra ireto i Jinja :
02:45 : Tapaka avokoa ny lalana rehetra. Efa ho 70 ny mpitandro ny filaminana ary anjatony ireo mpandrava trano. Eny ambony tafontrano ireo mpitandro filaminana sady mamefy ny “Andiany 78″ [anaran'ilay faritra resahana]. Roapolo ireo mpanara-maso manodidina ary ao anatiny ireo media. Ora roa sy sasany mialohan'ny misandratra andro. AZAFADY, alefaso amin'ny Facebook ireo hafatrareo [teny anglisy].
LICADHO : Ireo mpiara-miasa izay vao tonga ao DK: mpitandro filaminana manodidina ny 250 mitondra fitaovam-piadiana samihafa, anisan'izany ireo mpitandro filaminana mpandrava korontana, mpitifitra rano amin'ny tafondro miisa roa, mpiasa madinika maherin'ny 250 manao fanamiana manga na fotsy miaraka amin'ireo vy, ireo fively, famaky ary kamiao marobe.
Bridges Across Borders : Andalam-pamindràna an-kery ny ao Dey Krahom . Tongava azafady raha azonareo atao ary ampitampitao amin'izay olona fantatrareo ity vaovao ity.
Potika ilay fonenana tsizarizary tao Dey Krahorm ao Phnom Penh [teny anglisy]. Vinaniana ho 800 ka hatramin'ny 1 400 no isan'ireo olona nipetraka tao tamin'ny taona 2005. Notombanan'ny Tanàna ho fianakaviana 90 sisa no tavela tao.
Manampy trotraka ny herisetra nanaraka ny fandroahana an'ireo mponina tao aminy, nisarika ny sain'ireo media ny famotehana an'i Dey Krahom satria io no “iray amin'ireo fandraharahana goavana indrindra mikasika ny fananganan-trano tato anatin'ireo taona folo farany”. Nefa laviniireo tomponandraikitry ny Tanàna ny hiaiky hoe asa fandroahana io [teny anglisy]:
Nanambara ny Governora Lefitra ao Phnom Penh Mann Chhoeun fa tsy fandroahana io asa io. “Tsy fandroahana ny famotehana an'ireo trano tao Dey Krahom, fanalalahana fotsiny ny toerana mba hanaovana asa fanorenana no tanjony”.
lahatsary maneho ny famotehana ny Dey Krahorm.
Afaka nanaraka ilay famotehana i Jivy [teny anglisy]
Ireo kapokapoka maritoa naneno mafy no nanaitra ahy io maraina io. Nanahy noho ny fiavian'ireo tabataba, nijery teo ambaravarankely aho ary hitako ireo lehilahy anjatony miankanjo maitso eo andalam-pandravàna an'ireo tangoron-trano madinika manoloana ilay tranobe izay onenan'ny ankohonako. Io no voalohany nahitako trangan-javatra tahaka izao ary marinkoditra aho. Marobe ireo mpitandro filaminana nanakana ny toerana voafaritra ary anjatony ireo olona nanomboka nijery hatreny amin'ny misy azy ireo ny fomba fandravàn'ireo Kambodjiana mpiray tanindrazana aminy ny tranon'ireo olona hafa tao anatin'ny fotoana fohy monja.
Rava tsirairay ireo trano, avy lavitra, nahita setroka aho fa tsy haiko na baomba mandatsa-dranomaso io na famonoana afo. Hitako ireo mponina mijoro manoloana an'ireo trano, mihiakiaka ny hatezerana manohitra an'ireo mpandrava, ary ny sasantsasany aza maratra mihitsy satria tsy nety niala sy voatery niady tamin'ireo mpitandro filaminana.
Tsy haiko manontolo izay tantara ambadik'izao trangan-javatra mampihorohoro izao, tsy fantatro na an'ny fanjakana ny tany na an'olon-tokana. Fa izay fantatro, misy an'ireo olona eny andalam-be ankehitriny mangataka fotoana hatrany mba hiadiana hevitra momba ity tranga ity tialohan'ny fandravàna. Saingy manampin-tsofina ireo olona tsisy fo.
Nandray feo an'ireo mponina tao amin'ny faritr'i Dey Krahom [teny anglisy] ny KI-Media hoe:
Dia nihiakiaka tamin'ireo mpitandro filaminana àry ilay vehivavy hoe: “Kambodjiana ianareo, nefa mikasa hamono Kambodjiana. Nopotehinareo ny tranoko. Mitovy amin'ireo dahalo ianareo”
Mipetraka eo ambonin'ireo korontan-trano ny vehivavy iray mponina ao Dey Krahom, miandry ny kamiao iray hitondra azy any an-toeran-kafa. “Tsy manam-bola aho”, hoy izy. “Inona no azoko atao? Tsy fantatro aiza no hatory. Tsy misy azoko atao satria nopotehin'izy ireo avokoa ny zavatra rehetra”.
Sary miaraka amin'ny fanomezandàlan'i Jinja.
Tezitra amin'ny “tsy fisiana fanajana tanteraka ny zon'ireo olona sy ireo filàna faran'izay kely mikasika ny fiainana maha-olona” ny Tripping in Cambodia [teny anglisy]:
Ny herinandro lasa teo, nitsidika ny faritra atao hoe Dey Krahom aho. Tsy misy intsony io faritra io ankehitriny. Ny herinandro lasa teo aho nisaotra an'ireo ankizy izay nilalao manoloana ny tranon'izy ireo. Amin'izao fotoana izao tsy manan-trano intsony ireo ankizy ireo. Ny herinandro lasa teo niditra ny kianjan'izy ireo aho, tamin-tsikim-pirahalahiana sy teny iray fanohanana. Ankehitriny ny kianjan'izy ireo, feno ireo miaramila anjatony sy mpitandro filaminana mpandrava korontana, miaraka amina baomba mandatsa-dranomaso sy ireo bildaozera mpitrongy tany. Ary ankehitriny tsy manana na inona na inona intsony izy ireo.
Ny maraina teo, nihorohor aho nijery ireo mpitandro filaminana anjatony izay namefy an'i Dey Krahom aho. Tao aoriana kely, notantaraina tamiko ireo tantara mampihoronkoditra tao anatin'ilay faritra. Ireo mpitrongy tany nisoroka an'ireo trano raha toa ireo mponina, ireo tompony ara-dalàna, niezaka ny nanangona ny fananan'izy ireo tao anaty fakofakon-javatra. Fianakaviana 150, ka maro tamin'izy ireo no efa nonina tao amin'ny faritra nandritra ny 25 taona, no natosika tampoka sy an-kerisetra ho eny an-dalambe.
Tezitra mafy aho noho ny tsy fisiana fanajana tanteraka ny zon'ireo olona sy ireo filàna amin'ny ampahany mikasika ny fiainana maha olona, tsy fisiana fanajana mikasika an'ireo zotra manaraka ny ara-dalàna, satria ireo olona ireo mahantra ary tsy manana fahefana, raha ilay orinasa te-haka ny tany kosa manankarena sy matanjaka.
Samphors, ao anatin'ny fanehoankevitra amin'ny lahatsoratra iray teo amin'ny A Photo Diary [teny anglisy], miaro fijery iray hafa:
Heveriko fa efa nilazàna mialoha izy ireo ary nahafantatra tsara, sady efa nomena tambiny mifanaraka amin'izany. Saingy io tambiny io no lavin'izy ireo ary mihoatra lavitra noho izay tokony ho izy no angatahin'izy ireo. Ambonin'ny zavatra rehetra, tsy tompon'ny tany akory izy ireo. Tsy maintsy alain'ny tena tompon'ny tany ny fananany mba ho tombontsoan'ny fampiroboroboana ny firenena. Miresaka fotsiny aho, miainga avy amin'izay zavatra niainako taloha tamin'ny tranga nitovy tamin'io. Miala tsiny aho raha hafa ny fomba fijeriko.
Efa miisa 246 ireo mpikambana ao amin'ny vondrona Facebook Cambodia Evictions Update [teny anglisy] [ny 26 janoary 2009]. Azo jerena ao amin'ny Flickr ary tao amin'ny pejy Multiply an'ny Jivy. ireo sary hafa mikasika ilay famotehana